Ra'isul Wasaaraha oo booqday xarunta Taliska ciidanka Booliiska lana kulmay Saraakiil |
Ra’isul Wasaaraha oo booqday xarunta Taliska ciidanka Booliiska lana kulmay Saraakiil
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ay wehliyaan Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya ayaa maanta booqday xarunta Taliska ciidanka Booliiska Soomaaliya ee kutaala magaalada Muqdisho.
Ciidamo katirsan booliiska Somaaliya ayaa salaan sharaf iyo gaardo ka ciyaar kusoo dhaweeyay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo masuuliyiintii kale ee la socotay, waxaana salaanta kadib R/Wasaaraha uu kormeeray xarunta taliskla booliiska.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya, waxa uuna warbixin ka dhageestay taliyaha ciidankaasi Generaal C/xakiin Daahir Saciid Saacid.
R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa saraakiisha booliiska uu la kulmay kala hadlay sida ay ciidamada booliiska uga qeyb qaadanayaan xasilinta amaanka magaalada Muqdisho, waxa uuna kula dar daramay saraakiisha in ay xoojiyaan waajibaadka loo igmaday.
Waxa uu sheegay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre in uu horey uso noqaday askari katirsan ciidanka booliiska Soomaaliya kana soo shaqeeyay salhiga booliiska degmada Hodan, waxa uuna xusay in booliisku uu yahay ilaaliyaha sharcida iyo dadka.